आफ्नै कोठामा मृत भेटिए म्यादी प्रहरी, के हो रहस्य ? — Sanchar Kendra
आफ्नै कोठामा मृत भेटिए म्यादी प्रहरी, के हो रहस्य ?
हुम्ला । हुम्लामा एक जना म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएको छ। सर्केगाड गाउँपालिका-६ घर भई सिमकोटमा बसेका ४४ वर्षीय जसबहादुर रोकायाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णराज ओझाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार बुधबार मतदान केन्द्रमा सबैलाई खटाइएको थियो। उनले हिजो साथीको डेरामा बस्न गएको बताए। ‘ढोका बन्द गरेर सुतेको रहेछ। ढोका नखुलेपछि घरबेटीले आज ५ बजेतिर हामीलाई खबर गरेको थिए’, उनले भने,‘रोकायाको शव भुइँमा मृतक अवस्थामा भेटिएको हो।’
प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । उता मुस्ताङमा तिर्थयात्री बोकेको बसले ठक्कर दिँदा एक जना पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ।
बिहीबार वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका-४ मा दुर्घटना हुँदा स्थानीय पैदलयात्रीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रामकुमार यानीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार विराटनगरबाट तिर्थायात्री बोकेर आएको ना ५ ख २१४९ नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको हो। बस तिर्थयात्रीलाई दर्शन गराएर विराटनगर फर्किँदै थियो।
‘घुम्ती ओरालो छ। घुम्तीमा बस चिप्लिएर दुर्घटना भयो। त्यसपछि पैदलयात्रीलाई लागेर मृत्यु भयो,’ प्रहरी नायब उपरीक्षक यानीले भने।
बसमा सवार घाइतेहरूको जिल्ला अस्पताल जोमसोममा उपचार भइरहेको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ।